MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Soomaaliya, gaara ahaan Safiirka u fadhiya wadanka Zimbabwe, Jamaal Maxamed Barrow ayaa ku guuleystay wadahadal lagu soo deynayay 15 qof oo Soomaali ah, kuwaasoo dalkaan mudo maxbuus ku ahaa.
15-ka qof ayaa waxay ku jireen xabsiga dhexe ee Magaalada Harare ee caasimada Zimbabwe, ku dhawaad muddo 8 bilood, waxana bishii November soo xiray ciidamada amaanka, kadib markii si sharci daro ah ay dalkaas ku galeen.
Danjire Barrow ayaa sidoo kale sheegay in dhawaan la filayo in lasoo sii daayo Todobo qof oo kale, kuwaasoo uu tilmaamay inay iyagana hadda ku jireen Xabsiyadda wadanka Zimbabwe.
Wuxuu u mahad-celiyay Safiirka Jaaliyadda dalka Hindiya, kuwaasoo uu tilmaamay inay iyaga bixiyaan qarashaadka dalka dib loogu soo celiyay 15-ka qof ee Muwaadiniinta Soomaaliyeed ah.
Safiirka wuxuu kaloo mahad-naq uu ujeediyay dowladda Zimbabwe, oo ku tilmaamay tahay mid xiriir wanaagsan oo soo jireen ah la leh xukuumadda Muqdisho, isagoo balanqaaday inay si dhow ula shqayn doonan.
Xabsiyadda caalamka waxaa ku jira muwaadiniin Soomaaliyeed, kuwaasoo falal dambiyeedyo kala duwan lagu soo eedeeyay, iyadoo dowladda hadda jirta u muuqato mid indhaha ka laabaatey inay wax ka qabto arrimahaas.
Dowladda Federaalka ayaa ku guuleysatay inay dib ugu soo celiso Muhaajiriin...